Unokundinceda ndiqonde i-Amazon usetyenziso lwe-algorithm?
I-Amazon usetyenziso lwe-algorithm yokukhangela kwemveliso (eyaziwa nangokuthi yi-A9) yenzelwe ukubeka imveliso eyahlukileyo ukwenzela ukuba xa umthengi ehamba efuna into ethile ethengiswayo-iziphumo zophando ezifanelekileyo zidibene kunye kwaye zinikezelwe ngamanyathelo amabini kuphela. Kulula nje, xa umthengi onokuqhuba uphendlo lwemveliso, i-Amazon usetyenziso lwe-algorithm wenza konke okusemandleni ukuzama ukubonelela ngeziphumo eziphambili ezihambelana nesicelo somthengi. Nangona i-Google ibonisa iziphumo ezibonelela impendulo engcono kumbuzo wokukhangela ofakwe ngumsebenzisi, i-Amazon usetyenziso lwe-algorithm igxininise ekuboniseni ukuba imveliso yomthengi iyakwazi ukuthenga. Kuthetha ukuba inkqubo yokubeka iipropati kwi-Amazon iyona ecacileyo, xa kuthelekiswa nomgaqo ofanayo owenziwe yiinjini eziphambili ezifana ne-Google ngokwalo, kunye ne-Yahoo, iBing, njl.
Izinto eziphambili ze-Amazon Usetyenziso lwe-Algorithm
Kuthathwe ngokuqhelekileyo, injongo ephambili ye-Amazon usetyenziso lwe-algorithm kukuqinisekisa ukuba ingeniso engaphezulu nganye kumthengi ngamnye othengayo ngaphezulu Pha - samsung ctc showroom. Phakathi kwamanye, ukulungiswa kwe-injini ye-Amazon ukubheja kwizinto ezahlukeneyo zangaphakathi. Ndiyathetha ukuba akukho ukulungiswa kwamaphepha kwi-Amazon - ayikhathali nje ingqalelo kwingxenye yengonyama ye-SEO ye-off-page, njengemidiya yoluntu, ukwakha ikhonkco, igunya lolawulo, kunye nokunye. Njengoko ndithe ndathetha, injongo ephambili ye-Amazon usetyenziso lwe-algorithm kukufumana ininzi kwiRevenue Per Per Customer (RPC). Ngenxa yoko, izinto ezibalulekileyo ezithathwa ingqalelo kwi-A9 zilandelayo:
Ireyithi yokuguqula - iqhutyelwa ngokubanzi ngababuyekezi bakho kumakhasimende, intengo yokukhuphisana, kunye nomgangatho womfanekiso wemveliso.
Ukubuyiselwa kunye nokuThuthukiswa kwabathengi - ngelixa iziganeko zokubaluleka zixhomekeke kakhulu kwisihloko somkhiqizo kunye nenkcazo yemveliso, inqanaba elifanelekileyo lokuneliseka kwabathengi nalo lifumaneka phakathi kokubaluleka kokubaluleka ngaphezu Pha.
Ukugcinwa - ezi zinto zihamba ngokubanzi malunga ne-ODR (ukulungiswa kwezinga lokulahleka), kunye nempendulo evela kumthengisi.
Ngokwe-A9 yama-Amazon usetyenziso lwe-algorithm, inzuzo enkulu inokufumaneka kuphela ngokwenza abaninzi abathengi kwaye bahlale bebuya ukuze bathathe enye into ekuthengwa kuyo. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ngaphandle kwe-RPC ephezulu, i-Amazon ibona ukugcinwa kwabathengi ngokunjalo. Kuthetha ukuba xa ubeka umkhiqizo othile, i-Amazon ayisebenzisi nje kuphela iirhafu zokuguqulwa, kodwa kunye nezindleko zabo ezilindelekileyo. Ngokucacileyo, ama-Amazon angalindela ngokufanelekileyo ukuba acothulwe phantsi, enikwe ukuba ithegi yentengo yemveliso ethile iphezulu kakhulu kuneminye imveliso efana neyo yabonwa kwimarike. Khumbula, ukugqitywa kwiphepha lakho lemveliso kunye nalo lonke iqela eliphambili elizaliswe ngokupheleleyo libaluleke kakhulu kwi-Amazon yokubeka i-algorithm. Ngoko, kufuneka ugweme ukuba naliphi na insimi enye ingenanto okanye ingazalwanga ngokupheleleyo. Ngaloo ndlela, uya kuhlala unethuba elingcono lokuboniswa phezulu kwi-SERP kwisicelo esifanelekileyo sezinto ezivela kwi-shopper.